08/14/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Wednesday, August 14, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
သူမ၏ ချစ်သူဟောင်း အတော်များများနှင့် ပတ်သက်လျှင် သူမအတွက် ကျန်ရှိခဲ့သော အရာသည် နောင်တ တရား သာ ဖြစ်ကြောင်း တေလာဆွစ်ဖ်က ဖွင့်ဟပြောကြားလိုက်သည်။ နာမည်ကျော် လူငယ်ကြယ် ပွင့်များ အပါအဝင် အမျိုးသား အတော်များများနှင့် ခေတ္တမျှသာ တွဲလေ့ရှိခဲ့ဖူးသူ Country ဂီတ အဆိုတော်မလေးက အသည်းကွဲ ဝေဒနာသည် သူမ၏ ဂီတဘဝတွင် အောင်မြင်အောင် အထောက် အပံ့ ပေးကြောင်းလည်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ We Are Never Ever Getting Back Together သီချင်းဖြင့် အောင်မြင် မှုများ ရရှိနေသည့် တေလာသည် ဂျွန်မေယာ၊ ဂျက်ဂါလင်ဟားလ်၊ တေလာလော့တ်နာ၊ ဟယ်ရီစတိုင်းလ် တို့ အပါအဝင် အမျိုးသား အချို့နှင့် တွဲခဲ့ဖူးသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, August 14, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဘင်္ဂါလီ အရေး အမှန် တရားကို မျက်ကွယ်ပြုသူ များသည် ပြည်သူ အပေါ် သစ္စာ မဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်
Posted by drmyochit Wednesday, August 14, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံများတွင် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာကိုလိုက်၍ အုပ်စုဖွဲ့ နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။ ၎င်းနိုင်ငံများထဲမှ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်နိုင်ငံများသည် အခြားဘာသာများနှင့် အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်ခြင်း မရှိသည်မှာအားလုံးအသိပင်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ၎င်းဘာသာဝင်တို့၏ထိုးနှက်မှုကြောင့် ပဋိပက္ခ များ မကြာခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘင်္ဂါလီများကိစ္စသည် အပ်နဖား လောက်မျှသာ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း မစ္စတာကင်းတားနား နှုတ်ဖျားသို့ရောက်ရှိသည့်အခါ ပင်လယ်ကြီးပမာ ကြီးမားကျယ်ပြန့် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီအရေးအား ၎င်းတို့ဘာသာဝင်များမှ ပြောရဲဆိုရဲကြသော်လည်း မိမိတို့နိုင်ငံရှိ ပြည်သူလူထု ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများက အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းမပြောဆိုရဲ၊ မဟရဲကြသည်မှာ အံ့သြဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလည်း အလိမ်အညာဇာတ်လမ်းဆင်တော့မည့် မစ္စတာကင်းတားနား မြန်မာပြည် ကို ရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီ။ ၎င်း ပြန်သွား၍ ကုလသမဂ္ဂသို့ ရောက်ရှိသည့်အခါ အလိမ်အညာဇာတ်လမ်းအား တင်သွင်းပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုတာ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု ၁၃၅ မျိုး အရေးဟာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးသားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင် ကုလားအရေးဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အမျိုးသားရေး လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်ဘာသာသာသနာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပြည်သူများမှ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု မပေးနိုင်သည့်အတွက် ယခင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားခဲ့တဲ့ နေရာတွေ၊ တိုင်းပြည်တွေမှာ ယခု အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ရောက်ရှိလာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်မှု ပျောက်ခဲ့ တာကို အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ မလေးရှား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်တို့အား ကြည့်လျင် လက်တွေ့ သာဓက ထင်ရှားတွေ့နေရပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မြန်မာရှိနေစေဖို့ လိုသလို မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ စုစည်းပြီးတော့ ထေရ၀ါဒထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ လိုပါ တယ်။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ သမ္မတကအစ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူထုခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပြည်သူပြည်သား အားလုံး မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ အရာရာမှာ လူ့အခွင့်အရေး ပေတံ တွေနဲ့ တိုင်းတာနေမယ်ဆိုလျင် ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ထေရ၀ါဒထွန်းကားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှိနေလိမ့်ဦးမည် မဟုတ်ပေ။
အစ္စလာမ် ကိုးကွယ်သည့် ဘင်္ဂလီလူမျိုးများသာရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ဘင်္ဂလီများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ၏ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းကိုယှဉ်ကြည့်လျင် အသိသာ ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဘင်္ဂလီများအနေဖြင့် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို မိန်းမ ၄ ယောက်ယူပြီး ကလေးဒါဇင်နဲ့ ချီပြီး မွေးနေချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ မိန်းမ ၁ ယောက်သာ ယူပြီး ကလေး ၂ ယောက် ၃ ယောက်သာ မွေးဖွားနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ဦးမှ မိန်းမ ၄/၅ ယောက် ယူနေသူများက လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတာဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊ ကလေးအခွင့်အရေးတွေ ထည့် စဉ်းစား သင့်ပါတယ်။
ဒီကလေးမွေးဖွားနှုန်းကို ချင့်ချိန်ကြည့်ပါက နောင်နှစ်ပေါင်း ၅၀ ခန့်မှာ ဘင်္ဂလီလူမျိုး သွေးနှော ထားတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်လာမည်မှာ မလွဲဧကန်ပင်။ ဒီအခြေအနေရောက်၍ သွေးနှောခံရပါက အမျိုးမစစ်တော့သဖြင့် အမျိုးမချစ်နိုင်တော့ပေ။ ထင်ရှားသည့် သာဓကအနေဖြင့် အမေစုကိုယ်တိုင် လူမျိုးခြား ဘာသာများဖြင့် ရောနှောနေထိုင်သည့်အခါ မိမိအမျိုးဘာသာကို စောင့်ထိန်းရမည်ကို သိရှိသော်လည်း စောင့် ထိန်းနိုင်ခြင်းမရှိသသည့်အတွက် တိုင်းတစ်ပါးသားဖြင့် အကြောင်းပါခဲ့ပါသည်။ အမေစုကိုယ်တိုင် ပညာတွေ အများကြီးတတ်သော်လည်း သားသမီးဝတ်ထဲမှ “စောင့်လေမျိုးနွယ်”ကို စောင့်ထိန်းနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို အမေစု ကိုယ်တွေ့အသိပင်ဖြစ်ပါသည်။ မစ္စတာ ကင်တားတားနား မြန်မာပြည်ကို ရောက်ရှိလာပါသည်။ အမေစုနှင့် တွေ့ဆုံဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။ တွေ့ဆုံပါက အမေစုအနေနဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ အမျိုးမပျောက်စေဖို့ ဘင်္ဂါလီအရေး ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများဘက်မှ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည်ပြောကြားပေးစေလိုပါသည်။
မစ္စတာကင်းတားနား အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတာ မပြောလိုပေမဲ့ ဘက်တစ်ဖက်ထဲ ကိုကြည့်၍ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစား၍ မရပါ။ နှစ်ဖက်လုံး ညီတူညီမျှကြည့်ဖို့လိုပါသည်။ ဒါ့အပြင် လူ့အခွင့် အရေးကို လေးစားသလို ဥပဒေကိုလည်း လေးစားဖို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များဖြင့် ရေးဆွဲထားသော ဥပဒေအသီးသီး ရှိကြပြီး ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှသာ လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကလေး အခွင့်အရေးများကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံလူထု၏ လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများကိုလည်း လေးစားလိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်သင့်သော အချက်အလက်ပြည့်စုံသူများကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများက ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကင်းတားနားအနေဖြင့် အဆိုပါဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ပြောခွင့်မရှိပေ။
ဘင်္ဂါလီ သာမက မည်သူမဆို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်လိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကို လိုက်နာ ရပါမည်။ လိုက်နာလိုခြင်းမရှိပါက ဤနိုင်ငံတွင် မနေသင့်ပေ။ အလားတူ ရုရှားသမ္မတ ပူတင်နှင့် သြစတြေးလျ ၀န်ကြီးချုပ်များကလည်း ၎င်းတို့နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်သူ မည်သူမဆို ၎င်းတို့ဥပဒေကို လိုက်နာရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်များကိုလည်း ကမ္ဘာသိအောင် ကြေငြာထားရှိပြီး ဖြစ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများ၏ သမိုင်းအတွေ့ အကြုံများအားကြည့်၍ သင်ခန်းစာယူရပေမည်။ သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောခဲ့သည်ကို ဖော်ပြ လိုပါသည်။ ဆရာကြီးမှာ သမိုင်းသင်တာဟာ “မအ” အောင်လို့ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ရှေ့တွင် သမိုင်း သင်ခန်းစာများရှိလျက် သမိုင်းကို သိပါလျက်နှင့် “အ”နေသောသူများ ရှိနေပါသည်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၏ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုသူနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများမှာ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ အတွက် “ အ ’’ နေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဘာကြောင့် “ အ ’’ နေလဲဆိုတာ တော့ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်များမှ သိလိမ့်မည်ဖြစ်ပေသည်။ ဒီလိုအချိန်တွင် သမ္မတလုပ်သူ ဦးသိန်းစိန် တစ်ယောက်အနေဖြင့် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြတ်ပြတ်သားသား မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိကြောင်း ပြောဆိုနေချိန်မှာ အမေစုနှင့် မင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် ၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ နှုတ်ဆိတ်နေကြပေသည်။ ဒီလိုနှုတ်ဆိတ်နေမှုကြောင့် ကုလအတွင်းရေးမှူး ဘန်ကီမွန်မှ ဘင်္ဂလီများအရေး အစိုးရအား ဖိအားပေးလာနေပါပြီ။ အမျိုးဘာသာ သာသနာအရေးတွင် ငါသမ္မတ မဟုတ်လို့ဆိုပြီး ခေါင်းရှောင်မနေဘဲ ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ သင်ခန်း စာတွင်ပါသည့် “ပြိုင်တူတွန်းလျှင်ရွေ့နိုင်ပါသည်” ဟု ဆိုသည့်အတိုင်း အမျိုးဘာသာ သာသနာ့အရေးအား ပြိုင်တူတွန်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အမေစုနှင့် မင်းကိုနိုင်အနေဖြင့် နိုင်ငံအကျိုး၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ အကျိုး၊ သာသနာ့အကျိုးအား မိမိကိုယ်ကျိုးထက်ဦးစားပေးပါက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် လက်တွဲ၍ ပြိုင်တူတွန်းနိုင်ပါက ဤခရီးနီးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိမိနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအရေး၊ နိုင်ငံအရေးနှင့် သာသနာအဓွန့်ရှည် တည်တံ့ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်အမှန်တရားအားတွေ့မြင်သိရှိပါလျက်နှင့် မျက်ကွယ်ပြုခြင်းသည် ပြည်သူ အပေါ် သစ္စာမဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
မွတ်စလင်နဲ့ မြန်မာတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု လုပ်ဖို့ ကုလတိုက်တွန်း
Posted by drmyochit Wednesday, August 14, 2013, under သတင်းများ | No comments
မြန်မာအစိုးရနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က မွတ်စလင်တွေအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခ သည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးက အရာရှိ Andrian Edwards က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခကြောင့် ခုချိန်ထိ အိမ်မပြန်နိုင်ပဲ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ နေနေရတဲ့ မွတ်စလင်တွေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေကြား ငြိမ်းချမ်းရေးအရ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ပြီး တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ယုံကြည်မှုတွေ တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစား သင့်တယ်လို့ ပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို တွေ့ဆုံမှုတွေက နောက်ထပ် အကြမ်းဖက်မဖြစ်အောင် တားဆီးနိုင်မယ့် အဓိက အချက် အဖြစ် မြင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က လုံထိန်းရဲတွေနဲ့ မွတ်စလင်တွေကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီး မွတ်စလင်တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂက အရာရှိက ခုလို ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ တိုမတ်စ်အိုဟေးကင်တားနားကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ကို နှစ်ရက်ကြာလည်ပတ်ခဲ့ပြီး ခုအခါမှာ ရန်ကုန်မြို့ကို ပြန်ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်အတွင်း ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေ အများစုနေထိုင်တဲ့ စစ်တွေမြို့က အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ကို လည်ပတ်ခဲ့ပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါ့အပြင် စစ်တွေမြို့အကျဉ်းထောင်ကိုလည်း လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အလာမှာ ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရသလိုပဲ အပြန်မှာလည်း သူ့ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မစ္စတာကင်တားနားဟာ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိတ္တီလာမြို့အပြင် တခြားဒေသကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာဖို့ရှိပြီး ဆယ်ရက်ကြာ ခရီးစဉ် အဆုံးသတ်တဲ့နေ့မှာတော့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
From : ..Radio Australia
၇ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး ငယ် ကို ရထားပေါ် မှာ အဓမ္မ ကျင့်မှု အိန္ဒိယ မှာ ဖြစ်
အသက် ၇ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး ကို ရထားတွဲ အိမ်သာထဲ မှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ တဲ့ သံသယ ရှိသူ တွေ ကို အိန္ဒိယ ရဲတပ် ဖွဲ့က အပူ တပြင်း လိုက်လံ ဖမ်းဆီးနေ ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သောကြာနေ့ည ဘက် ဒါမှမဟုတ် စနေ နေ့ မနက် လင်းအားကြီး အချိန် မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်စော် ကား ခံရတာ ဖြစ် တယ်လို့ရဲတပ် ဖွဲ့က အင်္ဂါနေ့ ကျမှ သတင်း ထုတ် ပြန်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရတဲ့ မိန်းကလေး ကို စနေ နေ့ မနက် မှာ ရထား ဘူတာရုံ မှာ တွေ့ ရှိ ပြီး နောက် ရဲတပ် ဖွဲ့က ဆေးရူံ ကို ပို့ ဆောင်ခဲ့ ပါတယ်။
မိန်းကလေး ရဲ့ပြော ပြ ချက် အရ သူ့ ကို သားမယား ပြု ကျင့်ခဲ့ သူဟာ အသက်၄၀ လောက်ရှိ ပြီ လို့ဆိုပါတယ်။
ဘီလပူုရ ရဲတပ် ဖွဲ့က သံသယ ရှိသူ ကို သတင်း ပေး နိုင်ခဲ့ ရင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ၄၀၈ ဒေါ်လာ နဲ့ညီမျှ တဲ့ ရုပီး ငွေ ကို ပေးမယ်လို့ကြေငြာထား ပါတယ်။
သားမယား ပြု ကျင့်ခဲ့သူ က မိန်းကလေး ကို ရူပီး ၁၆ ဆင့် ပေးခဲ့ တယ် လို့မိန်းကလေးရဲ့ ပြောကြား ချက် ကို ကိုးကား ပြီး ရဲတပ် ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ က အသက် ၂၃ နှစ် အရွယ် ဆေးကျောင်းသူ လေး ကို နယူးဒေလီက ဘတ်(စ) ကား ပေါ် မှာ မုဒိမ်းကျင့် ပြီး ရိုက် နှက် သတ် ဖြတ် မှု ပေါ်ပေါက် ပြီး နောက် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ တ၀ှမ်းမှာ အမျိုးသမီး အခွင့် အရေးတောင်းဆို တိုက် ပွဲ ၀င်မှု တွေ ပေါ်ပေါက် ခဲ့ ပါတယ်။
(CNN) — A 7-year-old girl was raped inatrain’s toilet compartment in central India over the weekend, police said Tuesday.
ငါတို့ရှမ်းပြည်မှာ အခုထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေသူ တစ်ဦးကို ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ် သူကတော့ SSA ခေါင်းဆောင် ရွက်ဆစ်ပါ ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာ သမ္မတကြီးနဲ့လဲ နေပြည်တော်မှာ သွားပြီး စကားပြောတယ်၊ ပြီးတော့ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-ရှမ်းပြည် ထဲမှာ ၁ လလောက်လှည့်ပြီး သတင်းသမားတွေကော၊ ပြည် သူတွေ နဲ့ကော တွေ့သေးတယ်လေ၊ နိုင်ငံခြားဖြစ် မျက်မှန်အမဲကြီးတပ်ပြီး ရှမ်းလိုဝတ်လိုက်၊ အနောက် တိုင်း ကုတ်အင်္ကျီကြီး ၀တ်လိုက်နဲ့ တရုတ်သူဌေးကြီး ၁ ဦး လိုပါပဲ၊ တကယ့်ကို လေးစား အထင်ကြီးလောက် တဲ့ ပုံတွေ လုပ်ပြသွားခဲ့တယ်။
သြော် … ဒါပေမယ့် မင်းဘယ်လိုတွေ လုပ်ပြနေနေ ရွက်ဆစ်တို့၊ စိုင်းနော်ခမ်းတို့ ဆိုတာ မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် နာမည်ကြီး ချမ်းသာနေတဲ့ ဘိန်းရာဇာတွေဆိုတာ ငါတို့နယ်မှာ မသိတဲ့မရှိ သလောက်ပဲလေ၊ ၂ ယောက်စလုံး ခွန်ဆာရဲ့ တပည့်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဆရာကတောင် ထိန်းမနိုင်ခဲ့တဲ့ သူတွေမဟုတ်လား၊ နော်ခမ်း ၁ ယောက်တော့ သွားရှာပြီ တရုတ်ပြည်မှာ သေဒဏ်ပေးခံလိုက်ရပြီတဲ့၊ ရွက်ဆစ်ရေ မင်းကတော့ လူကသာ အတန်းပညာမတတ်တယ် အင်မတန် ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်များသူပဲ မင်းရဲ့ လှည့်ကွက်တွေနဲ့ ထိုးကျွေး၊ ပေးကျွေးတာ စားနေတဲ့ ထိုင်းအဖွဲ့တွေက သိသိကြီးနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး မင်းကို ဆုတံဆိပ်တောင်ပေးလိုက်သေးတယ်ဆိုပဲ။
ငယ်ငယ်က ၇ တန်းနဲ့ စည်းကမ်းပျက်လို့ကျောင်းထုတ်ခံရပြီး ၁၇ နှစ် သားနဲ့ ဘိန်းမှောင်ခို မိုးဟိန်းအဖွဲ့ထဲဝင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း မင်းရဲ့ လူသတ်၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် အနိုင်ကျင့်မှုတွေမှာ အများက သြချလောက်အောင် လုပ်ပြနိုင်တာကြောင့် နေရာရလာတာဟာလည်း မင်းရဲ့ပညာပဲမဟုတ်လား။
ဘိန်းမှောင်ခို မိုးဟိန်းနဲ့ ခွန်ဆာတို့ ပူးပေါင်းတော့ မင်းကို ခွန်ဆာက ဗိုလ်မှူးကြီး ရာထူးပေးတယ်၊ ခွန်ဆာအဖွဲ့ စစ်အစိုးရမှာ အလင်းဝင်တော့ ခွန်ဆာနဲ့အတူ လိုက်ပါခဲ့ပေမယ့် မူယစ်ဆေးဝါး လုပ်ငန်းက ရတဲ့ငွေတွေ၊ ဒေသမှာ လက်နက်ပြ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နိုင်မဲ့ အခွင့်အာဏာတွေ မရနိုင်မှန်းသိလို့ တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ ခွန်ဆာရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့က ပြန်ထွက်ပြေးပြီး သူခိုး၊ ဂျပိုး၊ ဘိန်းစား တွေကိုစုဖွဲ့လို့ SURA ကို ဖွဲ့ပြီး မင်းခေါင်းဆောင် စလုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။
ငါတို့လူမျိုးမှာ အကြီးအကဲ စော်ဘွားမျိုးတွေကို ဂုဏ်ပြုပြီး နာမည်ရဲ့ရှေ့မှာ အသုံးအနှုန်း တစ်ခု ဖော်ပြကြတယ်။ အဲဒါကတော့ မြန်မာစာနဲ့ရေးရင် “စပ်” ၊ ရှမ်းစာနဲ့ရေးတော့ “စ၀်” ၊ အသံ ထွက်တော့ “စောက်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးပဲဖြစ်တယ်။ အခု တို့ရှမ်းပြည်မှာ မင်းသားလို နာမည်ကြီးနေတဲ့ SSA ခေါင်းဆောင်ကြီး မင်းကို ငါတို့အသိအမှတ်ပြုပြီးခေါ်ပါရစေ။ အဲဒါကတော့ “စောက်ရွက်ဆစ်ရေ”
“စောက်ရွက်ဆစ်ရေ” ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးသွားမှာဆိုးလို့ ဘာကြောင့်ဒီလို ခေါ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပြဦးမယ်။ မြန်မာစကားမှာ အသုံးမကျတဲ့သူကို ရင့်ရင့်သီးသီး ထိထိရောက်ရောက် ဖြစ်စေဖို့ “စောက်သုံးမကျသူ” ဆိုပြီး သုံးတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တာ၊ ငါတို့ ရှမ်းပြည်နဲ့ လူမျိုးတွေအတွက် မင်းဟာ စော်ဘွားအရာမှာထားဖို့ မထိုက်တန်ဘဲ စောက်သုံးမကျတဲ့သူသာဖြစ်တယ်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်နေချိန်ဖြစ်လို့ စစ်အစိုးရတပ်တွေ အသွားအလာနည်းတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ရွာတွေကို ဘိန်းစိုက်ပျိုးဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တယ်၊ ဘိန်းစိုက်ဖို့ ငွေကြိုထုတ်ပေးတယ်၊ ပြီးတော့ ဘိန်းပြန်ကောက်တယ်၊ ဘိန်းဖြူနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဖြန့်တယ် ငါတို့ဒေသခံတွေကလဲ တစ်ခြားသီးနှံစိုက်တာထက် ဘိန်းကငွေပိုရပြီး ရောင်းဖို့ အဆင် ပြေတော့ ဘိန်းပဲ စိုက်ကြတာပေါ့။ ဒေသမှာရှိတဲ့ ၉၀% ကျော်လဲ ဘိန်းစားတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ ဒေသခံတွေရဲ့ ဘိန်းအရောင်းအဝယ်ကို ချုပ်ကိုင်ထားပြီး အာဏာရှိနေတာရယ်၊ နယ်မြေအတွင်း ဘုရင်တစ်ဆူလိုသာမက အရီးကြီး တစ်ယောက်လို ကိုးကွယ်နေကြရတာရယ်ကြောင့် ရွက်ဆစ်ဟာ ဆရာ့ဆရာကြီးပဲမဟုတ်လား။ ၂၀၁၀ လွယ်တိုင်းလျှံနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ကိုယ့်ဘာသာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့တာလည်း ချီးကျွေး ထိုက်ပါပေတယ်။ ရွာတိုင်း တစ်အိမ်တစ်ယောက် ရှမ်းစစ်သားအဖြစ် ပေးရတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီစစ်သား ထွက်ပြေးခဲ့ရင် သူ့ရဲ့မိသားစုကို ဖမ်းတယ်။ နှစ်ခါထွက်ပြေးလို့ ပြန်မိရင် မင်းတို့ပြောနေကျ စကားရှိတယ် “အမဲခြောက် လုပ်ပစ်လိုက်” (သတ်ပစ်လိုက်လို့ပြောတာ) အဲဒီတော့ တော်ရုံတန်ရုံ ဘယ်ပြေးရဲတော့မလဲ။ ရောက်တဲ့ရွာမှာ မိန်းမပျို တစ်ယောက်မက ဆက်သပေးရတယ်။ မင်းတင်မက အဲဒီ မိန်းကလေးတွေကို ပြည်ပနိုင်ငံကိုပို့ပြီး မင်းရဲ့အပေါင်းအသင်း မူးယစ်ရာဇာတွေအတွက် လက်ဆောင်ပေး ရက်ရောတာ မင်းရဲ့ အကုသိုလ်ယူမှုလား။ တရားဝင်မယား ၂၇ ယောက် (တရားမဝင်မပါ) ရှိတဲ့အပြင် မင်းတို့အဖွဲ့က ဒုတိယဦးစီးချုပ် ခေးငယ် ရဲ့သမီးကိုလဲ တရားဝင်ယူတယ်။ ကဲ ပြောမယ့်သူ ဘယ်သူ ရှိသေးလဲ။
စောက်ရွက်ဆစ်ရေ မင်း ငါတို့ရှမ်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဘာတွေများ ကောင်းတာလုပ်ခဲ့လဲ မင်းကြောင့် ငါတို့ပြည်နယ်မှာ မတရားအသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မိသားစုတွေရဲ့မျက်နှာ၊ အစော်ကားခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ခံစားချက်၊ လူညွန့်တုံးပြီး ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့ ဘိန်းစားဖြစ်သွားသူတွေရဲ့ဘဝ၊ ပညာကောင်းကောင်းမသင်ရဘဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်စစ်တပ်ထဲဝင်လို့ အသေဆိုးနဲ့ သေခဲ့ရ သူတွေရဲ့ ဝိဥာဉ်တွေ၊ အနာဂတ် မှုန်ဝါးနေတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ ဒါတွေဒါတွေကို မင်းသိစေဖို့ ရေးသားလိုက်တာပါ။ “ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော” ဆိုတဲ့ မင်းနဲ့ အကျင့်စရိုက်တူ မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း စိုင်းနော်ခမ်းကတော့ မင်းရောက်မလာသေးလို့ တမျှော်မျှော်နဲ့ အထူးငရဲပြည်မှာ စောင့်နေမှာ ဖြစ်လို့ “စောက်ရွက်ဆစ်ရေ” ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီး . . . . . . .
iPhone၊ Android Phoneနှင့် BlackBerry Phone ကိုင်သူများအပေါ် စစ်တမ်းတစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာ
Posted by drmyochit Wednesday, August 14, 2013, under သတင်းများ | 1 comment
ထိပ်တန်းဖုန်း သုံးမျိုးဖြစ်သော iPhone၊ Android Phoneနှင့် BlackBerry Phone ကိုင်သူများ၏ ယေဘုယျ လူမှုလက္ခဏာများကို လေ့လာထားသည့် စစ်တမ်းတစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ ထိုစစ်တမ်းအရဆိုလျှင် iPhoneကိုင်သူများသည် အပျင်းပိုထူကြပြီး အလှအပကိုလည်း ပိုကြိုက်ကြကာ အလှအပဆိုင်ရာ Applications၊ Websiteများကို ပိုအကြည့်များသလို အဝတ်အစား ဝယ်ယူမှုလည်း ပိုများကြကြောင်း သိရသည်။
BlackBerry Phone ကိုင်သူများကား ဝင်ငွေအများဆုံး ရသူများဖြစ်ပြီး ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ခိုင်မြဲစွာ တည်ဆောက်နိုင်သူများလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Android Phone ကိုင်သူများမှာမူ မိတ်ဆွေပေါသူများ ဖြစ်သလို လူမှုဆက်ဆံရေးလည်း ပိုကောင်းကြပြီး အချက်အပြုတ်လည်း ပိုရကာ မီးဖိုချောင်ထဲတွင် အားကိုးရသူများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ လေ့လာမှု စစ်တမ်းကို ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ Talk Talk Mobile ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးက ဖုန်းအသုံးပြုသူ အသီးသီး၏ လူနေမှုပုံစံ စရိုက်လက္ခဏာများကို မေးမြန်းစစ်တမ်း ကောက်၍ ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်သည်။လေ့လာမှုစစ်တမ်းအရ ထပ်မံသိရှိရသည်များမှာ iPhoneကိုင်သူများသည် အလှအပကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားသလို ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့လည်း ပိုပြီးအမြင် တင့်တယ်သူများဟု သဘောထားရှိတတ်ကြောင်း သိရသည်။
BlackBerry Phone ကိုင်သူများကား အလုပ်ပိုရှုပ်သူများ ဖြစ်သလို Emailလည်း ပို၍ ပို့တတ်ကြပြီး Messageလည်း ပို၍ ပို့ကြကာ ဖုန်းလည်း ပိုခေါ်ဆိုကြကြောင်း သိရသည်။ Android Phone ကိုင်သူများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများဆုံး ဖြစ်လာသည်နှင့်အညီ မိတ်ဆွေအပေါဆုံး လူများဖြစ်ကြသည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ် Android Phone ကိုင်သူများသည် အခြားဖုန်း ကိုင်သူများထက် ယမကာ ပိုသောက်သူများ ဖြစ်နေကြောင်း လည်း တွေ့ရသည်ဟု ဆို၏။ သို့သော် လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းတွင်မူ မိတ်ဆွေပေါသော Android သမားများက ပို၍ နေတတ်ထိုင်တတ် ရှိကြောင်းလည်း တွေ့ရပြန်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
သို့ရာတွင် iPhone၊ Androidနှင့် BlackBerry Phone ကိုင်သူတိုင်းလည်း အထက်ပါ စစ်တမ်း ဖော်ပြချက်များအတိုင်း ကံသေကံမ ဖြစ်ရမည်ဟု မဆိုလိုကြောင်း၊ အားလုံး ခြုံငုံ၍ ယေဘူယျ တွေ့ရှိချက်များကို ဖော်ပြ ထားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း Talk Talkမှ ဒါရိုက်တာ ဒန်မီဒါက ပြောကြားသည်။
ဗြိတိန်၏ လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်းပိုင်ရှင် မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်
မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်၏ သီချင်းတစ်ပုဒ်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်းများ စာရင်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထိပ်ဆုံးနေရာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ Disney စတားဟောင်းဖြစ်သည့် အမေရိကန် အဆိုတော် မင်းသမီးသည် Hannah Montana ရုပ်သံစီးရီးများတွင် လူငယ်ကြယ်ပွင့်လေး တစ်ဦးအဖြစ် စတင်ထင်ရှားလာပြီး ယခုအချိန်တွင်မူ ဆွဲဆောင်မှု ပြည့်ဝသည့် မိန်းကလေး တစ်ဦးအဖြစ် လူလားမြောက်လာခဲ့သည်။ အသက်(၂၀) အရွယ်ရှိ မိုင်လီသည် We Can't Stop သီချင်းဖြင့် ဗြိတိန်၏ လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်းများ စာရင်းတွင် နံပါတ်(၁) နေရာကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
ယခင်က ဗြိတိန်တွင် ယင်းကဲ့သို့ လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်းစာရင်း ထိပ်ဆုံးနေရာ၌ မိုင်လီတစ်ခါမျှ ရပ်တည်ဖူးခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ အဆိုပါ သီချင်းသည် သူမ၏ အသစ်ထွက်ရှိမည့် စတုတ္ထမြောက် စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ် Bangerzတွင် ပါဝင်လာမည် ဖြစ်သည်။ We Can't Stop သီချင်းသည် အမေရိကန်၏ လူကြိုက်အများဆုံး စာရင်းတွင် နံပါတ်(၂)နေရာ ရရှိထားသည်။ မိုင်လီသည် ဗြိတိန်တွင်လည်း လူငယ်ပရိသတ် အင်အားကို အခိုင်အမာ ရရှိထားသူ ဖြစ်သည်။ သူမအနေဖြင့် ယခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် Bangerz အယ်လ်ဘမ်သစ်ကို ထုတ်ဝေနိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။
We Can't Stopတွင် မိုင်လီအတွက် ဆွီဒင်နိုင်ငံသား DJတစ်ဦးဖြစ်သည့် အေဗစ်စီက အကောင်းဆုံး ကူညီ ပံ့ပိုးပေးထားသေးသည်။ Billboard မဂ္ဂဇင်းနှင့် အင်တာဗျူးတွင် မိုင်လီက သူမအနေဖြင့် ယခင်နှစ်အနည်းငယ်က ဂီတခံစားချက်မျိုးနှင့် ကင်းကွာသွားပြီဟု ဝန်ခံခဲ့သည်။ "ခုချိန်မှာ လူတွေက iTuneကနေ ကျွန်မရဲ့ သီချင်းဟောင်းတွေကို နားထောင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်မအသက် (၁၆)နှစ်၊ (၁၇)နှစ်လောက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကို ပြန်ခံစားကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်မနဲ့ အရမ်း ကင်းကွာသွားသလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ခုဆို ကျွန်မအသက် (၂၀)ရှိပြီ မဟုတ်လား"ဟု မိုင်လီက ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
ကွန်ဒုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလပ်များသို့ ကွန်ဒုံးများ စမ်းသပ်ဝေငှမည်
ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် ကွန်ဒုံးထုတ်လုပ်သည့် Durex ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ဖြန့် ဖြူးမည့် ကွန်ဒုံးများကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေးရှိ နိုက်ကလပ်များတွင် အခမဲ့ဝေငှ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသားကြီး တစ်ဦး မိမိလိင်အင်္ဂါကို ဓားဖြင့်လှီးဖြတ်
Posted by drmyochit Wednesday, August 14, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားကြီးတစ်ဦးသည် မိမိလိင်အင်္ဂါကို ဓားဖြင့် ပြန်လှီးဖြတ်သည့်အမှုတစ်ခု သြဂုတ် ၈ ရက်က ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါမြို့နယ်ရဲစခန်းက အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“အရက်ကြောင်ကြောင်ပြီး သူ့လိင်အင်္ဂါကို လှီးဖြတ်လိုက်တာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှုဖွင့် အရေးယူ တာတွေ မရှိပါဘူး”ဟု အဆိုပါရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျရဲတစ်ဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သြဂုတ် ၈ ရက် ည ၆ နာရီအချိန်ခန့်တွင် အဆိုပါအမျိုးသားကြီးသည် ဇနီးနှင့်အတူ ရှိနေရာမှ အိမ်နောက် ဖက်သို့ ထွက်သွားခဲ့ပြီး အချိန်အတန်ကြာသည်အထိ ပြန်မလာသဖြင့် လိုက်လံကြည့်ရှုရာတွင် ၎င်း၏ လိင်အင်္ဂါကို လှီးဖြတ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကာယကံရှင်၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ရဲကို ထွက်ဆိုထားသည်။
အဆိုပါအမှုအခင်းမျိုးသည် ဒဏ်ရာကို ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွားမပြမီ ရဲဆေးစာရရှိရန် လိုအပ်သဖြင့် ကာယကံရှင် မိသားစုဝင် တစ်ဦးကရဲများကို ထိုသို့ရှင်းလင်း ထွက်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကာယကံရှင်သည် အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးသဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံမှန်အခြေအနေမရှိဘဲ ယင်းကဲ့ သို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါအရင်းတွင် ပြတ်လုနီးပါးပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ တစ်ချက် ရရှိထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ရဲဌာနက ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် ရဲများက ဆေးစာရေးသား၍ သူ့ကိုသင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံသို့ ပို့အပ်ခဲ့ရာ ခွဲစိတ်ကုသဆောင်၌ ကုသမှု ခံယူနေပြီး စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေလည်း မရှိတော့ကြောင်း ဒဂုံဆိပ်ကမ်းရဲစခန်းမှ စုံစမ်းရရှိသည်။
အင်တာနက် နှင့် မီဒီယာအချို့၌ပျံ့နှံ့နေသည့် အသံဖိုင်ကိစ္စ မြန်မာ အမျိုးသား ကွန်ရက်ပါတီ ဥက္ကဌရှင်း
မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက် ပါတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အင်ပါယာနေ့စဉ် သတင်းစာ ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုနေသူ တစ်ဦးဖြစ် သည့် ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ ထင်ရှားသော ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပတ်သက် ၍ ဝေဖန်ပြောစကားအသံဖိုင်များအင်တာနက်စာမျက် နှာများနှင့် သတင်း မီဒီယာအချို့ ၌ ပျံ့နှံ့လျက် ရှိနေပြီး ယင်းအသံဖိုင် ဝေဖန်ချက်အချို့နှင့် ပတ်သက်၍ Hot News က ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်ထံ ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်း အတည် ပြုခဲ့သည်များကို ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါသည်။
“ကျွန်တော်လည်း မီဒီယာ ကိစ္စတွေ ၀င်လုပ်နေတာပဲလေ။ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ ကျွန်တော်နဲ့ ခုမှသိတာမဟုတ်ဘူး။ ဟိုငယ် ငယ်လေးကတည်းကသိခဲ့တာ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်က Lecture ရိုက်ခဲ့ တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ကောင်းမြင့်ထွဋ်က ၄၅ မိနစ်ကြာအောင် ဒေါ်စုကို Lecture သွား ရိုက်တာ၊ အဘွားကြီးစိတ်ညစ်နေ ဦးမယ်ဆိုပြီး ပါလာတဲ့ သူတွေကပြောတာ။ ပြီးကျတော့ ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်။ အသံ ဖိုင်က ဘယ်လို လဲတော့မသိဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ၀န်ကြီးတွေကို ကျွန်တော့် သတင်းစာယူဖို့နှုတ်မိန့်နဲ့ လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးပွဲ တွေမှာ ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ မွေး/ရေ ၀န်ကြီးဦးအုန်းမြင့်က သူနဲ့ ခင်တဲ့ အခါကျတော့ ကောင်းမြင့်ထွဋ်ရဲ့ သတင်းစာကို ၀န်ထမ်းတွေကို ယူခိုင်းရမယ်ဆိုပြီး နှုတ်မိန့်နဲ့ ပြောတာ။ ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ် ပါဘူး။ သူတို့မှာလည်း အားပေး ချင်တဲ့ စိတ်လေးလည်းရှိနေတယ်။ နောက်ဦးသုဝေတို့ ဦးခင်မောင်ဆွေ တို့ကိုပါတီထောင်ဖို့ကျွန်တော်ပဲ လုပ်ပေးခဲ့တာ ဒါအမှန်ပဲလေ။ အဲဒီလူတွေကို သွားမေးလိုက်။ ဦးသုဝေကိုဆိုလည်းဆုံးသွားရှာပြီ ဖြစ်တဲ့ ဦးရဲထွန်းတို့နဲ့ ဦးသုဝေလို လူမျိုးတွေကို ပခုံးထမ်းပြီးတင်ပေး ခဲ့ရတာ။ ၂၀၀၉ မှာလုပ်တဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ် ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကလည်း ကျွန်တော့်မှာရှိတာတွေကို ရောင်းချပြီးတော့ အခမ်းအနား တွေလုပ်ပေးခဲ့ရတာ။ ဦးခင်မောင် ဆွေဆိုလည်း ပါတီထောင်ဖို့ ကျွန်တော့်ကိုပထမဆုံးတိုင်ပင်ခဲ့တာ။ ဓာတ်ပုံအထောက် အထားတွေလည်းရှိတယ်။ ဦးခင်မောင် မောင်ဆွေလည်း အသိပဲ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကလည်း ဖြစ်လာသမျှကို တရားတဘောင်နဲ့ ရှင်းသွားဖို့ အားလုံးစီစဉ်ပြီးပါပြီ၊ မီဒီယာတွေအနေနဲ့ကလည်း ဒါကိုရေးမယ်ဆိုလည်း တရားဝင်ရေးလို့ရပါတယ်”ဟု ပျံ့နှံ့အသံဖိုင်ပါပြောစကားများအပေါ် ဦးကောင်း မြင့်ထွဋ်ကပြန် လည်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ပျံ့နှံ့အသံဖိုင်မှာ ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ပထမပတ်အတွင်းရုံး တွင်းပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးမှ ပြောဆိုချက်များဟု သိရပြီး အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခံရ၍ လူ့အခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဟုဆိုသော ၀န်ထမ်းများမှ တစ်ဆင့် ယင်းအသံဖိုင်မှာ အင်တာနက်စာမျက်နှာအချို့နှင့် သတင်းမီဒီယာ အချို့သို့စတင်ပျံ့နှံ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
From : ..ခန့်ခန့်(ဒဿနိက)
ဦးကောင်းမြတ်ထွဋ် ပြောထားသည့် အသံဖိုင်နှင့် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၄၅ မိနစ် ဆုံးမခဲ့သည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ကိုကောင်းမြတ်ထွဋ် (အသံဖိုင် နှင့် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း)
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကန်အနောက်ရပ်ကွက်၊ ဒေါ်သိန်းတင်လမ်းရှိ မြန်မာအမျိုးသား ကွန်ကရက်ပါတီရုံးချုပ်တွင် နေထိုင်သူ ပါတီဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဦးကောင်းမြတ်ထွဋ် သည် ပါတီပိုင် အပတ်စဉ်ထုတ် (အင်ပါယာ) ဂျာနယ်ကို သတင်းစာအဖြစ်ပြောင်း ထုတ်လုပ်နေပြီး ပါတီ၏စည်းရုံး ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို (၂ဝ၁၅) ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိင် ရေး အတွက် ကြိုးစားနေသူဖြစ်သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ကိုကောင်းမြတ်ထွဋ် မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက် အချို့မှာ
အမည်မဖော်လိုလျှင် ဂျာနယ်လစ် မလုပ်နဲ့ ဆိုက်ကားပြောင်းနင်း....
နေဝင်းမြင့်က ဘာတတ်တုန်း.. ဘာမှစောက်သုံးမကျပဲ အမတ်ဖြစ်တာ...
ဦးသုဝေ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တုန်းက ပြဿနာတတ်တာသိလား...
သူ့မွေးသက်ကရဇ်ကို ပြုစားမှာကြောက်လို့ဖုံးကွယ်ထားတာ သိလား..
ဦးခင်မောင်ဆွေက သူခိုးကြီးများ သမဂ္ဂလုပ်ခဲ့တာသိလား..
NLD က ကောင်တွေရော.. သူတို့ ဘုရားလိုကိုးကွယ်နေတဲ့ ဒေါ်စုရော? သူ့ကို ငါ ၄၅ မိနစ်လောက် လက်ချာရိုက်ခဲ့တာ..
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးထဲက မင်းတို့အထင်ကြီးတဲ့ တစ်ယောက် ငါ့ကို ထုတ်ပြ...
သတင်းစာ မှာ အမေစု ဆိုတာ မရေးနဲ့.. အဲလိုလျှောက်ဖားနေမယ်ဆိုရင် ဒီလှိုင်းမှာသွားရေး..
နိုင်ငံရေးသမားတွေ တစ်ကောင်မှ စောက်သုံးမကျဘူး... သူတို့စောက်သုံးမကျလို့ ဒီလိုဖြစ်နေတာ..
မနေ့တစ်နေ့ရမှပေါ်လာပြီး သူရဲကောင်းယောင်ယောင်... ဘာယောင်ယောင်နဲ့...
သတင်းထောက်လောကမှာ ကြောင်တောင်တောင်ကောင်တွေ အမျာြး ကီးရှိတယ်...
ဥက္ကာကိုကို တို့ ဟာဂျီဦးလှသန်းနဲ့ အမျိုးတော်တဲ့ကောင်...
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ် ရဲစခန်းအား DKBA တပ်ဖွဲ့က လက်နက်ဖြင့် ၀ိုင်းသည့်ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့
Posted by drmyochit Wednesday, August 14, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ကော့ကရိတ် ရဲစခန်းအား သြဂုတ် ၁၂ ရက် နေ့လယ်တွင် DKBA (တိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီ ကရင်အကျိုးပြု တပ်မတော်)က လက်နက်ဖြင့် ၀ိုင်းခဲ့သည့်ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကော့ကရိတ် ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်အရ သြဂုတ် ၁၂ ရက် နေ့လယ် ၁၂ နာရီခွဲခန့်တွင် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၀ ဦးခန့်က ကော့ကရိတ် ရဲစခန်းအား လက်နက်ဖြင့် ၀ိုင်းခဲ့သည့်ပုံစံ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး နေ့လည် ၁၂ နာရီ မိနစ် ၄၀ ခန့်တွင် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာ သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ၀ိုင်းခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်သည် မည်သည့်ကိစ္စကြောင့် ဖြစ်သည်ကို တိတိကျကျ မသိရှိရဘဲ သြဂုတ် ၁၀ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနေပြီး DKBA နှင့် ဆက်နွှယ်သော ဂိမ်းဆိုင်များအား ကော့ကရိတ် ရဲစခန်းမှ ၀င်ရောက်ရှာဖွေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ဖမ်းဆီးခြင်းများ မရှိခဲ့သော်လည်း ဆိုင်မှပစ္စည်းအချို့ကို သိမ်းယူသွားခြင်းများ ရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
"ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေက စီမံချက်နဲ့ လောင်းကစားဝိုင်း (ဂိမ်းဆိုင်)တွေကို ၀င်ဖမ်းတယ်။ ပစ္စည်းတွေကို သော့ပိတ်ပြီး ထားခဲ့တယ်။ နောက်နေ့တော့ ရဲစခန်းကို သယ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် DKBA တပ်ဖွဲ့ ဝင် ၄၀ လောက်က ရဲစခန်းကိုလာပြီး ပစ္စည်းပြန်ရဖို့ ပြန်တောင်းတယ်။ ရဲစခန်းကလည်း တံခါးပိတ်ပြီး အသင့်အနေအထား ယူခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့ ၁၂ နာရီ မိနစ် ၂၀ လောက်မှာ တစ်ခါ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကို သွားတယ်။ နေပြည်တော်ကို ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေရှင်းတယ် ထင်တယ်။ ခဏကြာတော့ ပြန်သွားကြတယ်။ ညကျတော့ စစ်တပ်က ရဲစခန်းထဲဝင်ပြီး နေရာယူတယ်။ မနေ့က တစ်မြို့လုံး စိုးရိမ်နေတယ်။ ဒီနေတော့ ဘာသံမှ မကြားသေးဘူး" ဟု ကော့ကရိတ် မြို့ခံတစ်ဦးက သြဂုတ် ၁၃ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
"၀ိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူကြီးချင်း တွေ့ကြတာပါ။ မနေ့က အဲဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကော့ကရိတ် ဆက်ဆံရေးရုံးကို လှမ်းမေးကြည့်ပါတယ်။ သူတို့က ၀ိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ လူကြီးချင်းတွေ့တော့ DKBA ဘက်က ဗိုလ်ကြီးနှစ်ယောက် ပါပါတယ်။ သူတို့သွားတဲ့အခါ သူတို့မှာ လုံခြုံရေး ရဲဘော်တွေ ပါသွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူများသွားတာပါ။ လူ ၄၀ လောက် ၀ိုင်းတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး" ဟု မြ၀တီမြို့မှ DKBA အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ ကော့ကရိတ် ရဲစခန်းသို့ မည်သည့်ကိစ္စဖြင့် သွားရောက်သည်ဆိုသော ကိစ္စနှင့် သြဂုတ် ၁၀ ရက်က ဖြစ်ခဲ့သော ကိစ္စရပ်များကို ၎င်းအနေဖြင့် တိတိကျကျ မသိရှိကြောင်း DKBA အရာရှိက ပြောကြားသည်။
"DKBA တွေက ကော့ကရိတ်ရဲစခန်းကို လာဝိုင်းတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အိမ်နှစ်အိမ်မှာ တရားမ၀င် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဂိမ်းဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကို ဖမ်းဆီးချိတ်ပိတ်ခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် DKBA တွေက သူတို့ဂိမ်းစက်တွေပါ ဆိုပြီးတော့ ကော့ကရိတ် ရဲစခန်းမှာ လာပြန်တောင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရ တရားမ၀င် ဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ သူတွေကို အရေးယူထားတဲ့အပြင် သူတို့လာပြီးတောင်းတဲ့ ဂိမ်းစက်တွေကိုလည်း ဥပဒေအရပဲ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ထားပါတယ်" ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် လုံခြုံရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ ဒုတိယရဲမှူးကြီး မင်းအောင်က သြဂုတ် ၁၃ ရက်တွင် The Daily Eleven သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
သြဂုတ် ၁၂ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိစ္စရပ်နှင့် ဆက်စပ်ပြီး ထိုနေ့ညပိုင်းနှင့် သြဂုတ် ၁၃ ရက် နံနက်ပိုင်းများတွင် မြ၀တီမြို့ပေါ်၌ ကရင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များအကြား လှုပ်ရှားမှု အနည်းငယ် ရှိခဲ့သော်လည်း သြဂုတ် ၁၃ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင်မူ တည်ငြိမ်သွားကြောင်း မြ၀တီမြို့ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
"ကွာရှင်းပြီးသားမယားအိမ် ကုလားဝင် ကျူးကျော်"
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ခါးတောက်ရင်းအုပ်စု၊ ယင်းသာကျေးရွာ၊ မအိအိဝင်း (ဘ) ဦးဝင်းမြင့်နှင့် မောင်နေလင်းဦး (ဘ) ဦးထွန်းဝင်းတို့ဟာ 2.7.2013 နေ့မှာ တရားဝင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး ကွားရှင်းထားကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ စာချုပ်ထဲမှာလည်း မအိအိဝင်း၏ ဘဝနစ်နာမှုအတွက် ငွေကျပ် (၂၅) သိန်းကို (15.8.2013) နေ့မှာ အပြေပေးချေဖို့ ကတိပြုချက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် နှစ်ဖက်မိဘအပါအဝင် ရပ်မိရပ်ဖများ သက်သေထားပြီး ချုပ်ဆိုခဲ့ကြတာပါ။ ထိုသို့ ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက် ဗလီဆရာ ဦးစိုးလွင်နှင့် ရွာဘုန်းကြီး ဦးအာစိဏ္ဏတို့ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး စီစဉ်ပေးခဲ့ကြတာပါ။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး (၁၇) ရက်မြောက် 19.7.2013 ရက်နေ့ မနက် ၃းဝဝ နာရီမှာ ကုလားမောင်နေလင်းဦးက အိမ်ကြမ်းခင်းဖောက်ပြီး တက်လာတာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ မအိအိဝင်း၏ အမေရယ်၊ ညီမလေးရယ်၊ အခြားအဖော်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရယ် စုစုပေါင်း (၄) ယောက်အတူအိပ်ကြပါတယ်။
(၄) ယောက်လုံးက လူ…လူ အော်ဟစ်ပြီး ဝိုင်းဖမ်းကြလို့ ကုလားပြန်ဆင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ အုပ်စုဥက္ကဋ္ဌက ရဲစခန်းလှမ်းတိုင်ရာမှ ၄င်းနေ့မှာဘဲ ရဲကလာဖမ်းသွားပါတော့တယ်။
ခုဆိုရင် ကုလားက အချုပ်ထဲမှာရှိနေပြီး။ 15.8.2013 ရက်နေ့မှာ ရုံးချိန်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မပြတ်နိုင်လို့ အိမ်တက်တာလား၊ စာချုပ်ထားတဲ့ (၂၅) သိန်း မလျော်ချင်တော့လို့ ပြဿနာရှာတာလား၊ မေးမြန်းစုံစမ်းနေချိန်မှာ ကုလားမိဘများဖြစ်တဲ့ ဦးထွန်းဝင်း+ဒေါ်သိင်္ဂီတို့က ရုံးရင်ဆိုင်လို့ သိန်း (၁၀၀) ကုန်ချင်ကုန်ပါစေ ဗမာတွေလက်ထဲ တစ်ပြားမှ မထည့်နိုင်ဘူး ဟု အတိအလင်းပြောလာကြောင်း သိရပါတယ်။
ကောင်မလေးက ကုလားခိုးရာလိုက်ပြေးခြင်းဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနားမှာ အတူနေကြတာပါ။ ကောင်မလေးက ကုလားအယူယူရပါတယ်။
မိဘတွေက အိမ်ခေါ်ထားတဲ့အခါ ကုလားက မိဘတွေနဲ့အတူစားသောက်ပြီး ကောင်မလေးကိုတော့ အိမ်ဝင်းထဲက နွားတင်းကုတ်မှာ အခန်းကန့်ပြီး ထားပါတယ်။ စားစရာအဖြစ် ဆန်နဲ့ဆီဘဲ ထောက်ပံ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးမနေနိုင်လို့ ဆင်းလာရာမှ ကွာရှင်းတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။
ယင်းသာရွာဟာ အိမ်ခြေ (၂၀၀) ခန့်ရှိပြီး မွတ်ဆလင်က အိမ် (၈၀)။ ဗမာအိမ် (၁၂၀) ခန့်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကုလားယူလို့ နွားတင်းကုတ်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ ဗမာအမျိုးသမီးတွေလည်း ရှိသေးတယ်ဆိုတာ ကန့်ဘလူက သက်သေပြခဲ့ပါပြီဗျာ။
ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော နေပြည်တော်- ရန်ကုန် နှစ်ဖက် အသင်းသားများအား ပြစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ပြီ
သြဂုတ် ၄ ရက်နေ့ ညနေ(၆း၀၀)နာရီက နေပြည်တော် ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိ ကွင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သော ၂၀၁၃ မြန်မာ
နေရှင်နယ်လိဂ် MNL Myanmar 2013 နောက်ဆုံး အပတ်ပွဲစဉ် ဖြစ်သည့် နေပြည်တော် အက်ဖ်စီနှင့် ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်း၌ ပွဲစဉ်္ကဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်စဉ်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် နည်းပြများနှင့် ကစားသမားများ ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီမှ သြဂုတ် ၁၃ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။
စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ အနေဖြင့် သြဂုတ် (၉)ရက်နေ့တွင် ပဏာမ စုံစမ်း စစ်ဆေးပြီး သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့တွင် တာဝန်ရှိ သူများကို ခေါ်ယူ မေးမြန်းခြင်းနှင့် မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုများ၊ ဓာတ်ပုံ အထောက်အထား များအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပြီးနောက် အောက်ပါအတိုင်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ အသင်းမှ ပြစ်ဒဏ်များ
(၁) အိမ်ရှင် နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ အသင်း အနေဖြင့် ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိ ကွင်းအတွင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ကုန်ကျစရိတ် များကို တစ်ဝက်ပေးလျော်ရန်။
(၂) ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲ ပထမ အကျော့ ပွဲစဉ်များကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခွင့် မပြုရန်။
(၃) နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ အသင်းမှ ကျောနံပါတ် (၁၂) ခိုင်ထူး အား စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးမူ အပိုဒ်(၄)နှင့် (၁၃)အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲတွင် တစ်ရာသီ ပါဝင် ကစားခွင့် မပြုရန်။
(၄) နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ အသင်း၏ ကျောနံပါတ် (၄) ဇော်လင်းအား စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးမူ (၁၃)အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲမှ စ၍ (၅)ပွဲ ပါဝင်ကစားခွင့် မပြုရန်နှင့် ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ် ငါးသိန်း (၅၀၀၀၀၀ိ/-) ပေးဆောင်ရန်။
(၅) နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ အသင်း၏ ကျောနံပါတ် (၁၆) တင်ဇော်မိုးနှင့် ကျောနံပါတ် (၂၉) အရန် ဂိုးသမား ဇော်မျိုးဦး တို့နှစ်ဦးအား စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးမူ အပိုဒ်(၁၃)အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲမှ စ၍ ပွဲစဉ်(၅)ပွဲ ပါဝင် ကစားခွင့် မပြုရန်နှင့် ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ် နှစ်သိန်း (၂၀၀၀၀၀ိ/-)စီ ပေးဆောင်ရန်။
(၆) နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ နည်းစနစ် အကြံပေး ဦးမျိုးဝင်းနှင့် နည်းပြချုပ် ဦးမျိုးလှိုင်ဝင်း တို့နှစ်ဦးအား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း ရေးမူ အပိုဒ် (၁၃)အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲမှ စ၍ ပွဲစဉ်(၃)ပွဲ ကွင်းအတွင်း ၀င်ရောက် ကြီးကြပ်ခွင့် မပြုရန်နှင့် ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ် ငါးသိန်း (၅၀၀၀၀၀ိ/-)စီ ပေးဆောင်ရန်။
ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အက်ဖ်စီ အသင်းမှ ပြစ်ဒဏ်များ
(၁) ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်း လက်ထောက်နည်းပြ ဦးတင်မောင်ထွန်းအား စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးမူ အပိုဒ်(၁၃) အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲမှ စ၍ ပွဲစဉ်(၃)ပွဲ ကွင်းအတွင်း ၀င်ရောက်ကြီးကြပ်မှု မပြုရန်နှင့် ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ် ၅ သိန်း (၅၀၀၀၀၀ိ/-) ပေးဆောင်ရန်။
(၂) ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်းမှ ကျောနံပါတ်(၈) ကြည်လင်းအား ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲမှ စ၍ ပွဲစဉ်(၃)ပွဲ ပါဝင်ကစားခွင့် မပြုရန်နှင့် ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ် ငါးသိန်း (၅၀၀၀၀၀ိ/-) ပေးဆောင်ရန် ပြစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ကြောင်းသိရသည်။ t
၁၅နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား ဘုန်းကြီးဝတ်ဖြင့် ခိုးယူပေါင်းသင်းသူ အရေးယူခံရ
Posted by drmyochit Wednesday, August 14, 2013, under မှုခင်း | No comments
သြဂုတ် ၁၂၊ အင်းတကော်
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်၍ ဘုန်းကြီးဝတ်ဖြင့် ကြည်ညိုလေး စားရာမှ ၁၅နှစ်အရွယ် မိန်းက လေးငယ်အား ခိုးယူပေါင်းသင်း သောအမှုကို အင်းတကော်ရဲစ ခန်းမှအမှုဖြစ်စဉ်အား ပဲခူး တရားရုံးသို့ တရားစွဲတင်လိုက် ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇူလိုင်လ၂၂ရက် ၉နာရီအချိန်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းတကော်ရဲစခန်းအပိုင်၊ သာ ယာအေးကျေးရွာ၊ ဘူးလယ်အင်း အုပ်စုမှ ဦးမြင့်ရွှေအသက်(၆၁) နှစ်(ဘ)ဦးမြ၀င်း လယ်လုပ်နှင့် ဒေါ်မြင့်ဝင်း၊ သမီးမအိမြတ်မော် (၁၅)နှစ်နှင့်အတူ သဲဖြူချောင်း ကျေးရွာ ရှိ အောင်သိဒ်္ဓိဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းတွင် ဥပုသ်သီလယူ ပြီး
နေ့လယ် ၁နာရီပြန်လာခဲ့ရာ သာယာအေးကျေးရွာနေ အစ် ကိုဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ ဦးအောင် ညွန့်၏ အိမ်သို့ဝင်ရောက်၍ သမီး အားအပ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်ဘုန်းကြီးကျောင်း မှ ဖခင်နှင့်မိခင် ညနေ ၃နာရီ တွင် သမီးအား ပြန်လည်ခေါ်ရာ ဦးအောင်ညွန့်အိမ်တွင်မရှိတော့ ဘဲ မအိမြတ်မော်၏မိခင်ဒေါ်မြင့် ၀င်းခေါ်ခိုင်းသည်ဟု လိမ်ညာ၍ မတင်တင်ယုက ပဲခူး-ရန်ကုန် ကားလမ်းလေး ဈေးတန်းလမ်း သို့ခေါ်သွားကြောင်း
ဖခင်နှင့်မိ ခင်သိလိုက်ရသည်နှင့် တစ်ပြိုင် တည်းလိုက်လံစုံစမ်းခဲ့ရာ ဘူး လယ်အင်းကျေးရွာအတွင်းရှိရေ ၀တာရာမကျောင်းတိုက်မှ ဘုန်း ကြီးဦးနန်္ဒ၀ံသ လူအမည်ဦးကျော် ထူးနှင့်အတူ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ ဖြင့် ထည့်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရှိ ရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်လံစုံစမ်းခဲ့သော်လည်း စုံ စမ်း၍မရသဖြင့် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် မိဘအုပ်ထိန်းမှု လက်အောက်ရှိ အသက်၁၅နှစ် သမီးဖြစ်သူ မအိမြတ်မော်အား ဘုန်းကြီးဝတ်ဦးနန်္ဒ၀ံသလူ အမည် ကျော်ထူးနှင့် အားပေးကူညီမှုပြု သူ မတင်တင်ယုတို့အား အရေး ယူပေးပါရန် ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးမြင့် ရွှေမှ တရားလိုပြုလုပ်ပြီး
အင်း တကော်ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ရာ အင်းတကော်ရဲစခန်းမှ ပ/၁၅၀ (၂၀၁၃)ဖြင့် လက်ခံ၍ ပြစ်မှုပုဒ် ၃၆၃/၂၉၄ က-၁၁၄အရေးယူ ပြီး အမှုစစ်ဒုရဲအုပ်ထင်ကျော်မှ လက်ခံစစ်ဆေးပြီး ထိုနေ့မှာပင် ဘုန်းကြီးဝတ်ဦးနန်္ဒ၀ံသအား လူ ၀တ်လဲစေ၍ ဖမ်းဆီးခြင်း၊
ကူညီ အားပေးသူ မတင်တင်ယုအား ဖမ်းဆီးခြင်း၊ သက်သေခံပစ်္စည်း များသိမ်းဆည်းခြင်း၊ သက်သေ များစစ်ခြင်း၊ အကြံပြုချက်တောင်း ခံခြင်း ရဲလုပ်ငန်းများကုန်စင် အောင်ပြုလုပ်၍ သြဂုတ်လ၇ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတရားရုံးသို့ တရားစွဲတင်ရာ ရာသေးနံပါတ် ၆၀၂၉ဖြင့် ပဲခူးမြို့နယ် တရားရုံး တရားသူကြီးမှ လက်ခံစစ်ဆေး လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
Posted From The Empire Daily News
မြန်မာသံရုံး ဗုံးခွဲရန် ငွေထောက်ပံ့သည်ဟု မသင်္ကာသူ အင်ဒိုနီးရှားရဲ ဖမ်းဆီး
အင်ဒိုနီးရှား အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ကို စီးနင်းမှုတခုတွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်ခဲ့သောအမှုတွင် ငွေကြေးထောက်ပံမှုပေးခဲ့သည်ဟု သံသယရှိသူ တဦးကို အင်ဒိုနီးရှား အကြမ်းဖက်မှုဖြိုခွဲရေး လက်ရွေးစင် တပ်ဖွဲ့တဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ဂျကာတာမှလာသော အေပီသတင်း၏အဆိုအရ အသက် ၂၆နှစ် အရွယ်ရှိ Muhammad Syaiful Syahbani ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျားဗားကျွန်း ပေါ်ရှိ ယော့ယာကာတာ ခရိုင်တွင် သောကြာနေ့က ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်ဟု အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲမှူးကြီး Agus Rianto ကပြောကြောင်း သိရသည်။ သူနှင့် အတူရှိခဲ့သော အခြားတဦးကိုလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က မေးမြန်းစစ်ဆေးနေပြီး သူတို့၏ ဆက်သွယ်ချက်ကို ယခုအချိန်အထိ ကွဲပြားစွာ မဖော်ထုတ်နိုင်သေးဟု သိရသည်။
မေလအတွင်းက လက်လုပ်ဗုံး ၅ လုံးကို ကျောပိုးအိတ်အတွင်းထည့်၍ သယ်ဆောင်လာသည့် Achmad Taufiq နှင့် Sefa Riano အမည်ရှိ သံသယရှိသူ စစ်သွေးကြွနှစ်ဦးကို မြို့တော် ဂျကာတာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဂျကာတာ တောင်ပိုင်းရှိ ၎င်းတို့ ငှားရမ်းထားသည့် အိမ်တွင် အခြားသော ပေါက်ကွဲစေသည့် ပစ္စည်းများကိုလည်း ထပ်မံသိမ်းဆည်းမိခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မွတ်ဆလင်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို လက်တုန့်ပြန်ချင်ကြောင်း သူတို့ နှစ်ယောက်က အာဏာပိုင်များကို ပြောခဲ့ကြကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။ Sefa Riano က မြန်မာသံရုံးကို တိုက်ခိုက်ရန် စီစဉ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည့် စာသားများ ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ရေးသားခဲ့သူဖြစ်သည်။
ရက်အနည်းငယ်ကြာသည့်အခါ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Rohadi အပါအ၀င် နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးကို အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့က ထပ်မံဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ ထွက်ဆိုချက်များ ကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ငွေကြေးထောက်ပံ့သည်ဟု မသင်္ကာသူကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခင်အပတ်ကလည်း ဂျကာတာမြို့ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားကျောင်းတခု၏ အပြင်ဖက်တွင် အသေးစားဗုံးတလုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ လူတယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ အခြားဗုံး နှစ်လုံးတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ပေါက်ကွဲခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်က နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အများအပြားပါဝင်သည့် လူ ၂၀၂ ဦး သေ ဆုံးခဲ့ရသည့် ဘာလီကျွန်းဗုံးခွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးချိန်ကစ၍ အကြမ်းဖက်ဝါဒီများကို ထိထိရောက်ရောက် နှိမ်နင်းနေခဲ့ရသည်။
မုံရွာမြို့တွင် နေအိမ်အတွင်း ပုတ်ပွနေသော လူသေအလောင်းတစ်လောင်းတွေ့ရှိ
မုံရွာ၊ သြဂုတ် ၁၁ ရက်နေ့
မုံရွာမြို့၊ စက်မှုဇုန်ရပ်ကွက်၊ ပန်းတမာလမ်းရှိ လူနေအိမ်တစ်လုံးအတွင်းမှ ပုတ်ပွနေသော လူသေ အလောင်း တစ်လောင်းအား ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်က တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း မုံရွာ အမှတ်(၂) ရဲစခန်းမှူး ဦးညီညီ အောင်မှ ပြောကြားသည်။
သေဆုံးသူမှာ ဦးအောင်မျိုးကြင် အသက် (၄၀)နှစ် အဖအမည် ဦးကြင် ဆိုသူဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းသေဆုံးနေ သူမှာ လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ပြီး ၎င်းနေအိမ်တွင် တစ်ဦးတည်းနေထိုင်သူဖြစ်ရာ ကျောက်ကပ်ရောဂါနှင့် ဟိုမုန်း အားနည်းရောဂါစွဲ ကပ်နေသူ ဝေဒနာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ကြောင်း ရဲစခန်းမှုးမှ ဆက်လက်၍ ပြောပြ သည်။
အဆိုပါ လူသေဆုံးနေမှုသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် သေဆုံးရသည်ကို ဆက်လက်၍ စီစစ်နိုင်ရန် အတွက် မုံရွာ အမှတ်(၂) ရဲစခန်း သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၁၁ / ၂၀၁၃ အရ ဆက်လက်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မှားဖျက်မိတဲ့ ဖိုင်များကို ပြန်ရှာနည်းများ
Posted by drmyochit Wednesday, August 14, 2013, under နည်းပညာ | No comments
Shift + Deleteနဲ့ ဖျက်မိလို့Recycle Binမှာလည်း ရှာလို့ မတွေ့တော့တဲ့ ဖိုင်တွေကို ပြန်ရှာဖို့ နည်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်၊ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဖိုင်တွေကို အောင်မြင်စွာ ပြန်ရှာနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေကို ရေးပေးပါမယ်။
တကယ် ဖျက်မိလားဆိုတာ သေချာအောင် အရင်စစ်ပါ
သင်ရှာနေတဲ့ ဖိုင်မတွေ့တော့တာဟာ တကယ် ဖျက်မိတာလား၊ နေရာထား မှားသွားတာလားဆိုတာ အရင် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ Recycle Binထဲသွားပြီး ဖိုင်ကို ပြန်ရှာပါ။ ဖိုင်တွေများပြားနေရင် Right Clickနှိပ်ပြီး Sort By>Date Deletedနဲ့ Filter လုပ်ပြီးရှာရင် ပိုလွယ်ကူပြီး မြန်မြန် ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့် ဖိုင်တွေကို Dropbox, Google Drive, or SkyDriveတို့လို Cloud Storageမှာ သိမ်းတတ်တဲ့သူဆိုရင် အဲဒီမှာပြန်ရှာပါ။ ရှာမတွေ့ ရင် Trashထဲမှာ ရှာနိုင်ပါသေးတယ်။ Trashကလည်း Cloud Storageရဲ့Recycle Binတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စက်ပစ္စည်းတွေဟာ ပျက်ဆီးတတ်တာကြောင့် သင့်ရဲ့ အရေးကြီးဒေတာတွေကို မှန်မှန် Backup လုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။ သင်ဟာ Backupလုပ်ထားသူ တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ Backupမှာ ပြန်ရှာပါ။
Windowsမှာ Backup Toolsတွေ ပါရှိပြီး Windows 7မှာပါရှိတဲ့ Previous Version Toolက ဖိုင်တွေကို ပြန်ရှာဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်ရဲ့ ဖိုဒါပေါ်မှာ Right Clickနှိပ်ပြီး Propertiesကိုနှိပ်ပါ။ Previous Versions Tabမှာ Backupတွေကို တွေ့ မြင်နိုင်ပြီး Openကို နှိပ်ပြီးရှာပါ။
Windows 8ရဲ့File History feature ကို အသုံးပြုရင်လည်း ဖိုင်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။ မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်ရဲ့ ဖိုဒါကို သွားပြီး History buttonကိုနှိပ်ပြီး ပြန်ရှာပါ။
အပေါ်ကနည်းတွေ သုံးပြီးသင့်ဖိုင်တွေကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင် File Recovery Softwareတွေ သုံးပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ Drive အမျိုးအစားပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ Drive တွေကတော့ Hard Disk Drive(HDD) or Magnetic Hard Driveတွေ ဖြစ်ပြီး Solid State Drive တွေကတော့ အသုံးပြုမှု နည်းပါတယ်။ သင့်ကွန်ပျူတာရဲ့Hard Driveက ဘာအမျိုးအစားလဲဆိုတာ Manufacturer Specificationမှာ ကြည့်ပါ။
HDDမှာ ဖိုင်တွေကို Pointersတွေနဲ့ညွှန်ပြပါတယ်။ Pointersတွေက အဲဒီဖိုင်ရဲ့ ဒေတာအစနဲ့အဆုံးနေရာတွေကို မှတ်သားညွှန်ပြတာပါ။ HDDမှာ ဖိုင်တစ်ခုကို ဖျက်လိုက်ရင် ၀င်းဒိုးက အဲဒီဖိုင်ရဲ့Pointer ကိုပဲ ဖျက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး အဲဒီနေရာကို Free Spaceအနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒေတာတွေကိုတော့ မဖျက်ပစ်သေးပါဘူး။
အဲဒီအတွက် ဒေတာတွေကို တစ်ခြား ဒေတာတွေ Overwriteမလုပ်ခင် File Recovery Softwareတွေနဲ့ အမြန်ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။ အမြန်ပြန်မရှာဘဲ တစ်ခြားဒေတာတွေ Overwriteလုပ်သွားရင်တော့ ပြန်ရှာလို့ မရတာတွေ၊ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပဲ ပြန်ရှာလို့ ရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
SSDမှာ ဖိုင်တစ်ခုကို ဖျက်လိုက်ရင် TRIM commandကို သုံးပြီး အဲဒီနေရာကို အပြီးဖျက်လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Recovery Softwareတွေသုံးပြီး ပြန်ရှာလည်း မရနိုင်တော့ပါဘူး။ Modern solid-state drives တွေနဲ့Windows7and 8စတဲ့ OSတွေမှာ TRIMကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ရှေးကျတဲ့ SSDတွေနဲ့Windows XPမှာတော့ TRIMကို Supportမပေးပါဘူး။ အဲလို အခြေအနေမှာတော့ သင့်ဖိုင်တွေကို Recovery Software တွေနဲ့ ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။
အန္တရာယ်အကင်းဆုံးနဲ့ အောင်မြင်မှု အရှိနိုင်ဆုံးနည်း
သင်ဖိုင် တစ်ခုကို မှားဖျက်မိလိုက်တာ သိသိခြင်းပဲ ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပါ။ မပိတ်ဘဲ File Recovery Software တွေကို အင်စတော လုပ်မယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ Free Spaceအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ သင့်ဖိုင်တွေကို Overwrite လုပ်ပြီးအပြီးတိုင် ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အင်စတောလုပ်ပြီးသား Softwareတွေ Backgroundမှာ Runနေတဲ့ Programsတွေကလည်း သင့်ဖိုင်တွေကို Overwrite လုပ်ကောင်း လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့်ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပြီး Driveကိုစက်ကဖြုတ်ပြီး တစ်ခြားစက်တစ်လုံးမှာ Secondary Driveအနေနဲ့တပ်ဆင်ပြီး Recovery Softwareတစ်ခုခုနဲ့ ရှာပါ။ ဒီနည်းက သင့်ဖိုင်တွေကို ပြန်ရဖို့ အန္တရာယ်အကင်းဆုံးနဲ့အောင်မြင်မှု အရှိနိုင်ဆုံးနည်းပါ။
အမြန်ဆုံးနည်း ဒါပေမယ့် စွန့်စားရမယ့်နည်း
ဖျက်မိတဲ့ဖိုင်က အရေးမကြီးတဲ့ ဖိုင်ဆိုရင် အမြန်ဆုံးပြန်ရှာဖို့File Recovery Softwareတွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Freeware တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Recuvaကို ဒေါင်းပြီး အင်စတောလုပ်ပါ။ Recuva နဲ့Driveကို Scanလုပ်ပြီး ဖိုင်ကို ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းကို သုံးရင် သင့်ဖိုင်တွေကို ပြန်ရဖို့ မသေချာပါဘူး။ Recuva ကို အင်စတောလုပ်တဲ့အခါ ဖျက်လိုက်မိတဲ့ဖိုင်ရဲ့ဒေတာတွေအပေါ်ကို Overwrite လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ခြား Runနေတဲ့ Programsတွေ၊ Backgroundမှာ Runနေတဲ့ Programsတွေကလည်း Overwrite လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဖျက်မိတဲ့ဖိုင်ဟာ သင့်အတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်ဖြစ်ပြီး အပေါ်ကနည်းတွေနဲ့ ပြန်ရှာလို့မတွေ့ရင် စက်ကိုပိတ်ပြီး Professional Data Recovery Servicesတွေဆီကို ပို့ လိုက်ပါ။ အဲဒီ Servicesတွေ Dying Hard Drive, Overwrite ဖြစ်သွားတာတွေကိုပါ ပြန်ရှာပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာမတော့ မခံပါဘူး။ အဲဒီ Servicesတွေရဲ့ ဝန်ဆောင်ခဟာ ကြီးမြင့်ပြီး နိုင်ငံခြားမှာတော့ ရှိပါတယ်။
ဒီမှာတော့ မသိပါ။ သင့်ရဲ့အဖိုးတန် ဖိုင်တွေ မပျက်ဆီးစေဖို့ 
သင့်ရဲ့အဖိုးတန် ဖိုင်တွေ မပျက်ဆီးစေဖို့အမြဲတမ်း Backupလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ Windows Backup Toolsတွေကို သုံးနိုင်သလို တစ်ခြား Softwareတွေကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ Cloud Storageတွေမှာလည်း သင့်ဖိုင်တွေကို သ်ိမ်းပြီး Backup လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Ref : http://www.howtogeek.com/169344/how-to-recover-a-deleted-file-the-ultimate-guide/
ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရားမဝင် အနှိပ်ခန်းများ ရဲက ဆက်တိုက်ဝင်ဖမ်း
ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရားမဝင် အနှိပ်ခန်းများကို ဆက်တိုက်ဝင်ဖမ်းလျှက်ရှိရာ ဩ ဂုတ် ၁၁ ရက် တစ်နေ့တည်း တွင် ပင် အနှိပ်ခန်းနှစ်ခု ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ပထမဖမ်းဆီးလိုက်သည်မှာ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော အနှိပ် ခန်းဖြစ်ပြီး ယင်းနေ့မွန်းလွဲ ၅ နာရီကျော်တွင် ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကာ အော်စကာ ဟူသည့် အမည်ဖြင့်ဖွင့်လှစ် ထားခြင်းဖြစ်သည် ဟု ရဲဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ထိုဆိုင်တွင် တာဝန်ခံအဖြစ်လုပ်ကိုင် နေသော ကိုဇော်နိုင်ဆိုသူကိုလည်း ရဲများက ဖမ်းဆီးခဲ့သလို အနှိပ်သမအဖြစ် သံသယရှိသည့် မိန်းကလေးငယ် ကိုးဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့သေးသည်ဟု ရဲဌာန၏ မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရဲများသည် အနှိပ်ခန်းဟု သံသယရှိသည့် ထိုဆိုင်မှ မွေ့ယာ၊ ခေါင်းအုံး၊ အိပ်ယာခင်း၊ စာရင်းစာအုပ်နှင့် ငွေကျပ် ၃၂၀ဝ၀ ကိုလည်း သိမ်းဆည်းခဲ့သေးသည် ဟုလည်း ဆိုထားသည်။
ထို့အတူ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက်ရှိ စင်းစင်း အမည်ရသည့် အနှိပ်ခန်းကိုလည်း ည ၈ နာရီအချိန်တွင် ရဲများက ဝင်ဖမ်းခဲ့သေးသည်။
ယင်းဆိုင်တွင် အနှိပ်သမဟု သံသယရှိသည့် အမျိုးသမီးငယ် ငါးဦးနှင့်အတူဆိုင်တာဝန်ခံ ကိုဇော်ဇော်ဆိုသူတို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး သက်သေခံ ပစ္စည်းများကိုလည်း သိမ်းဆည်းခဲ့သည်ဟု ရဲမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခုအမှုများကို ရဲများကပင် တရားလို ပြုလုပ်တိုင်တန်းထားပြီး ဖမ်းမိသူများကို တရားမဝင် အနှိပ်ခန်းဖွင့်သူများအဖြစ် စွပ်စွဲကာ အမှုဖွင့်ထားသည်ဟု ရဲစခန်းက ဆိုသည်။
၎င်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် တရားရုံးများတွင် ဦးတိုက်လျှောက်ထားကာ တရား စွဲဆိုသွားမည်ဟုလည်း တိုင်းရဲဌာန က ထုတ်ပြန်သည်။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ဟန့်တားနိုင်သော အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများ
Posted by drmyochit Wednesday, August 14, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
သန်စွမ်းတောက်ပြောင်ပြီး ထူထဲတဲ့ ဆံသားမျိုးကို အမျိုးသမီးတိုင်း ပိုင်ဆိုင်လိုကြပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်သန်စွမ်းတောက်ပြောင်ပြီး ထူထဲတဲ့ ဆံသားမျိုးကို အမျိုးသမီးတိုင်း ပိုင်ဆိုင်လိုကြပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်ပြီး ပါးလျတဲ့ ဆံသားတွေက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လှပမှုကို မှေးမှိန်စေပါတယ်။ လွယ်ကူတဲ့ အိမ်တွင်းနည်း တခိျု့နဲ့ ဆံပင်ကျွတ်တာကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
(၁) သဘာဝ အစားအစာများနှင့် ဆံပင်ကို အားဖြည့်ပါ။
အာဟာရဓာတ် ခိျု့တဲ့တာက ဆံပင်ကျွတ်တာရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း တစ်ရပ်ပါ။ ဆံသားတွေ သန်စွမ်းထူထဲဖို့က ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ လုံလောက်စွာ စားသုံးဖို့ လိုပါတယ်။ အာဟာရ ပြည့်စုံတာက ဆံပင်တွေ သန်စွမ်း ထူထဲစေတဲ့အပြင် ဆံပင်အရောင်ကိုလည်း တောက်ပြောင် လှပစေပါတယ်။ နေ့စဉ်စားတဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာ အောက်ပါ အစားအစာတွေ ပါဝင်အောင် စားပြီး ဆံပင်ကျွတ်တာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
မုန်လာဥနီ - ဗီတာမင်အေကို ရရှိပြီး ဦးရေပြားကို အာဟာရ ဖြည့်စွမ်းပေးပါတယ်။
ဆယ်လ်မွန်ငါး - အိုမီဂါ-၃ ရရှိပြီး ဆံသားတွေ တောက်ပြောင် လှပစေပါတယ်။
ဆီးသီးခြောက် - သံဓာတ်ြွကယ်ဝပြီး ဆံသား ခြောက်သွေ့တာ၊ ပါးတာနဲ့ ကြမ်းတာတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် -ကျန်းမာစေတဲ့အပြင် ဆံသားတွေ သန်စွမ်းစေပါတယ်။
သကြားမုန်လာ - သံဓာတ် ကြွယ်ဝပြီး ဆံသားတွေကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။
အုတ်ဂျုံ - ဇင့်ဓာတ်၊ သံဓာတ်၊ အိုမီဂါ-၆ အဆီတွေ ပါဝင်တာကြောင့် ဆံပင် အရှည်မြန်စေပါတယ်။
သစ်ချသီး - ဇင့်ဓာတ်၊ သံဓာတ်၊ ဗီတာမင်ဘီ-၁၊ ဘီ-၆၊ ဘီ-၉တွေ ပါဝင်ပြီး ဆံပင် သန်စေပါတယ်။
ဥအမျိုးမျိုး - ပရိုတင်း၊ ဗီတာမင်ဘီ-၁၂၊ သံဓာတ်၊ ဇင့်ဓာတ်နဲ့ အိုမီဂါ-၆ တွေ ပါဝင်တာကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်တာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
(၂) သဘာဝ အဆီများနှင့် ဆံပင် တောက်ပြောင်အောင် ပြုပြင်ပါ။
ဆံသား တောက်ပြောင်ဖို့၊ ဆံပင်သန်စွမ်းဖို့၊ ဆံပင်ကျွတ်တာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဆံသားကို ဆီလိမ်းပြီး ၂-၃မိနစ်ကြာ ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးတာကြောင့် ဦးရေပြား သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းစေပြီး ဆံချည်မျှင်အိတ်တွေကို နှိုးဆွပေးပါတယ်။ ဆီကို ခပ်နွေးနွေးဖြစ်အောင် အပူပေးပြီး ခေါင်းမလျှော်ခင် တစ်နာရီ အလိုလောက်မှ လိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ သံလွင်ဆီ၊ အုန်းဆီ၊ ဂနိုလာဆီ၊ လာဗန်ဒါဆီ၊ ဗာဒံစေ့ဆီ၊ နှမ်းဆီတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
(၃) အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ကို အသုံးပြုပါ။
အင်တီအောက်ဆီးဒင့်က ဆံပင်ကျွတ်တာကို တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ အပြင် ဆံပင်ပြန်ပေါက်အောင်လည်း ကူညီပေးပါတယ်။ အင်ဆီအောက်ဆီးဒင့် များစွာ ပါဝင်တဲ့ လက်ဖက်စိမ်းကို ရေနွေးတစ်ခွက်ထဲ ထည့်ပြီး ခဏနှပ်ထားပါ။ ရလာတဲ့ လက်ဖက်စိမ်းရည်ကို ဆံသား အနှံ့လိမ်းပြီး ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးပါက ဆံပင်သန်ပြီး ဆံပင်ကျွတ်တာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
(၄) တရားထိုင်ခြင်း၊ ယောဂကျင့်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပါ။
ဆံပင်ကျွတ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း တစ်ခုက စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ စိုးရိမ်စိတ်များတာကြောင့်ပါ။ တရားထိုင်တာ၊ ယောဂကျင့်တာတွေက စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အပန်းပြေစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်သောကတွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့နည်းသွားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဟော်မုန်းတွေ မျှခြေ ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာက ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်တာကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်တာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၅) ဦးရေပြားကို သန့်စင်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။
ဦးရေပြားက ထွက်တဲ့ အဆီတွေနဲ့ဖုန်၊ အမှုန်တွေ ပေါင်းပြီး ဆံသား ကျိုးပြတ်တာ၊ ဆံပင်ကျွတ်တာတွေ ဖြစ်စေတာကြောင့် ဦးရေပြားကို သန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရှမ်ပူနဲ့ ပုံမှန်ခေါင်းလျှော်တာ၊ သဘာဝအဆီ လိမ်းပေးတာတွေက ဦးရေပြား သန့်စင်စေပြီး ဖောက်တွေကိုလည်း ကင်းစင်စေပါတယ်။ သံပရာရည်၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်၊ စတော်ဘယ်ရီစတာတွေကို ဆံပင်ကျွတ်တာ သက်သာစေဖို့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်း အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီနဲ့ ချင်း(ဂျင်း)တွေကို အရည်ညှစ်ပြီး ဆံသားအနှံ့လိမ်းပြီး တစ်ညအိပ်ပါ။ မနက်မိုးလင်း ရေချိုးရင်းနဲ့ ခေါင်းလျှော်ပါ။ ဦးရေပြားနဲ့ ဆံသားမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယား၊ မှိုပိုးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
ပထမကလေးယူသည့် အသက်အရွယ် နောက်ကျခြင်း၊
ကလေးမမွေးခြင်း(သို့)ကလေးယူသည့်အရေအတွက် နည်းခြင်း၊နို့မတိုက်ခြင်း၊ရာသီသွေးဆုံးမှု နောက်ကျလွန်းခြင်း တို့သည် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပိုများစေသည်။
(၈) ရင်သားကင်ဆာ မျိုးရိုးရှိသူများသည် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများကြောင်း ဆက်စပ်တွေ့ရှိရသည်။
(၁) အ၀လွန်သူများ၊ ကိုယ်လက်လှုတ်ရှားမှုနည်းသူများ၊
အဆီအစားများသူ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့မှုများသူ အရက်သောက်သုံးသူနှင့် ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူများသည်
လည်း ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ဘင်္ဂါလီ အရေး အမှန် တရားကို မျက်ကွယ်ပြုသူ များသည် ပြ...
မွတ်စလင်နဲ့ မြန်မာတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု လုပ်ဖို့ ...
၇ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး ငယ် ကို ရထားပေါ် မှာ အဓမ္မ ကျ...
iPhone၊ Android Phoneနှင့် BlackBerry Phone ကိုင်သ...
ဗြိတိန်၏ လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်းပိုင်ရှင် မိုင်လ...
ကွန်ဒုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလပ်များသို...
အင်တာနက် နှင့် မီဒီယာအချို့၌ပျံ့နှံ့နေသည့် အသံဖိုင...
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ် ရဲစခန်းအား DKBA တပ်ဖွဲ့က လက်...
ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော နေပြည်တော်- ရန်ကုန်...
၁၅နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား ဘုန်းကြီးဝတ်ဖြင့် ခိုးယူေ...
မြန်မာသံရုံး ဗုံးခွဲရန် ငွေထောက်ပံ့သည်ဟု မသင်္ကာသူ အ...